शिक्षण पेशा र कलाकारीता सँगसँगै : दिवेन कार्कीको जीवनयात्रा - kageshworikhabar.com
शिक्षण पेशा र कलाकारीता सँगसँगै : दिवेन कार्कीको जीवनयात्रा
बाग्लुङमा जन्मे हुर्किनु भएका दिवेन कार्कीले शिक्षण र कलाकारीतालाई सँगसँगै अगाडि बढाउनु भएको छ । उहाँले शिक्षण पेशा थाल्नुभएको डेढ दशक तथा कलाकारीतामा लाग्नु भएको एक दशक पुग्नै आँटेको छ । कार्कीले आफुले गर्ने पेशालाई जीवन चलाउने माध्यम मात्रै नभएर अध्यात्म साधनाको रुपमा हेर्ने गरेको बताउनुहुन्छ ।
जन्म, परिवार र पेशा
कार्की २०४१ सालमा बाग्लुङको रेश चकमकेमा जन्मनु भएको हो । उहाँको परिवारमा बुवाआमा, दुई भाइहरु, श्रीमती, बुहारी र २ नानीबाबु गरेर नौ जना हुनुहुन्छ । उहाँले अंगे्रजीमा एम.फिल. (मास्टर्स पछिको अर्को डिग्री) सम्म अध्ययन गर्नु भएको छ । उहाँले आफ्नो बाल्यकाल मामा घर बाग्लुङ बलेवाको अमला चौरमा बिताउनु भएको थियो । उहाँले बलेवा अमला चौरमा अध्ययन गर्नुभयो ।
मामा घरमा बसेर पढ्ने भएकाले हजुरबुवा र मामा आन्टीहरुले केही कमी हुन नदिएको उहाँ सम्झनुहुन्छ । शिक्षक बन्ने बाल्यकालदेखिको सपना उहाँले पुरा गर्नुभयो ।कार्कीले जया मल्टिपल क्याम्पस माकलबारी काठमाण्डौमा अंग्रेजी, एपेक्स कलेज बानेश्वरमा बिजनेश कम्युनिकेशन र त्रिभुवन विश्व विद्यालय (एक्च्युरियल साइन्स) मा कम्युनिकेशन स्किल्स अध्यापन गर्नुहुन्छ ।
त्यसैगरी मोर्गन कलेज बसुन्धारा काठमाण्डौ,पोखरा युनिभर्सिटी ढुंगे पाटन लेखनाथ पोखरा कास्की,राष्ट्रिय उच्च माध्यमिक बिद्यालय पोखरा, माउण्ट अन्नपूर्ण क्याम्पस (अनुशासन प्रमुख पनि) फूलबारी पोखराका कलेजहरुमा पनि काम गरिसक्नु भएको छ ।
नाट्क,फिल्म सहित कलाकारीतामा
कार्की बहु प्रतिभा भएको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ । उहाँले संचारकर्मी र कलाकारको रुपमा पनि काम गर्नुभएको छ । उहाँले अहिलेसम्म चार वटा म्युजिक भिडियोमा मोडलको रुपमा काम गर्नुभएको छ । उहाँले भोकले मर्छु कि, म्हिगयागु सपना (नेवारी), तिमी जुन रहरले, जाउ है पोखरा म्युजिक भिडियोमा मोडलको रुपमा काम गरि सक्नु भएको छ ।
त्यस्तै अरु विभिन्न भुमिकाहरुमा कलाकारको रुपमा नाटक गर्नुभएको छ । उहाँले गर्नु भएको नाटकहरुमा मुकुन्द इन्दिरा (मुकुन्दको भूमिकामा),आधीको मनोरम नृत्य (हुलाकको कर्मचारी बुद्धिको भूमिकामा), ह्वाट क्यान आई डु? (अंग्रेजी कचहरी नाटक), सखी (क्याप्टेनको भूमिकामा), अनि देउराली रुन्छ (खुलालको भूमिकामा), दीक्षान्त (ईन्स्पेक्टरको भूमिकामा), चिरिएका साँझहरु (राजाको भूमिकामा) रहेका छन् ।
त्यसैगरी फिल्म विद्रोहको नेपाली नाम, ‘थाहा’ आन्दोलनका अगुवा रुपचन्द्र विष्टको जीवनीमा आधारित) मा र लघु चलचित्र श्रापितमा डाक्टरको भुमिकामा काम गर्नु भएको छ । त्यसैगरी बिज्ञापन, जनहितमा जारी सन्देश, कविता मंचनहरुमा पनि काम गरि सक्नु भएको छ । उहाँले समाचार वाचकको रुपमा एबीसी टेलिभिजनमा पनि २०६८/ ६९ मा काम गर्नुभएको थियो ।
कलाकारीतामा प्रवेश र अनुभव
कलाकारिता क्षेत्रमा स्कूल पढ्दादेखि उहाँलाई रहर जागेको हो । नियमित काम अध्यापन बाहेकको खालि समयको सदुपयोग गर्दै पार्ट टाइमको रुपमा लागेको उहाँ बताउनु हुन्छ । ‘भिन्न भिन्न माध्यममा प्रस्तुत भएर कलाकारीतामा लागेको एक दशक हुन लागि सक्यो । तर नाटकमा चाहिं ५ वर्ष मात्रै भयो ।’
कार्की भन्नुहुन्छ,‘नाटक क्षेत्रमा शिल्पी थिएटरमा प्रशिक्षार्थी भएर आवद्ध भएको थिए । अहिलेसम्म लामा र छोटा गरेर झन्डै पौने दर्जन जति नाटकमा काम गरे । यो क्षेत्रमा सिकाउने, लिएर जाने काम गुरु तथा हजुरबुवा भीमनाथ शर्माले गर्नुभयो । यसको लागि तीन महिने अभिनय प्रशिक्षण र तीन महिने सघन अभिनय प्रशिक्षण मात्रै लिएको छु ।
’नाटक मुकुन्द इन्दिरामा गरेको मुकुन्दको भूमिका, डाबर हर्बल टुथ पेस्टको विज्ञापन र राज सिग्देलको गीत भोकले मर्छु कि भन्ने म्युजिक भिडियो उहाँ आफैंलाई उत्कृष्ट लाग्छ ।
प्रेरणाको स्रोत र परिवारको साथ
यो क्षेत्रमा लाग्न र अगाडि बढ्न लागि हजुरबुवा सहित समग्र घर परिवार, दिदी बहिनी दाइभाइ, आफन्त र साथीहरु सबैको हौसला रहेको कार्की बताउनुहुन्छ । यो क्षेत्रमा लाग्न चाहने नयाँ पुस्तालाई उहाँको सुझाव छ, अन्तरमनले चाह्यो भने गर्दा हुन्छ। चर्चा र हल्लाको पछि भन्दा पनि कामलाई ठूलो मानेर गर्यो भने समाजले भन्ने गरेको सफल नभए पनि आत्म सन्तुष्टि मिल्छ।
टन्न कमाइन्छ भन्ने भ्रम चाहिं राख्नु हुँदैन। ‘पेशा गत हिसाबले मैले गर्दै आएको शिक्षण पेशा बदल्नु भन्दा त्यसलाई नै निरन्तरता दिने विचार किन हो भने खासमा म अरु जागिरको जस्तो टेबल वर्क भन्दा पनि विद्यार्थीको अगाडि वा समुहमा मौखिक रूपमा“डेलिभर“ गर्न रुचाउँछु ।’
कविता र ह्यान्डसम प्रतियोगिताको बिजेता
कार्की कविता लेखेर कलेजमा चार पटक र रेडियो नेपाल, पोखराबाट तीन पटक विजयी हुनुभएको छ । ह्यान्डसम पोखरामा विजेता तथा ह्यान्डसम नेपालमा फस्र्ट रनर अप तथा पब्लिक च्वाइसको उपाधि पनि हाँसिल गर्न सफल हुनु भएको छ । ‘अहिलेको अवस्था आफैंमा जटिल छ ।
सारा विश्व कोभिडले प्रभावित छ । कुनै क्षेत्र पनि अछुतो छ्रैन। म संलग्न दुवै क्षेत्र झन् बढी थिलोथिलो परेको अवस्था हो । आशा छ अब बिस्तारै गति लिन्छन् कि।’जुनसुकै क्षेत्रमा पुग्नलाई पनि चाहिने भनेको लगन, इमान, अनुशासन र नियमित प्रयास नै हो । आफ्नो लक्ष्य प्राप्तिको लागि आफुले सकेको कोशिस गर्नु पर्ने मा उहाँको जोड छ ।
जे मा मन रमाउँछ, त्यही काम इमान्दार पूर्वक गर्दा सफलता हात लाग्छ। ‘जीवन रहस्य हो, उतार चढाव हो, आफ्नो लागि मात्रै नभएर अरुका लागि पनि बाँच्नुपर्ने अचम्मको यात्रा हो ।’ कार्की भन्नुहुन्छ,‘जीवन जिउने क्रममा ठेस लाग्नु, लड्नु, फेरि उठेर हिँड्नु र असफलतालाई स्वीकार्नु नै यसको मज्जा हो।’
Previous articleटाइगर कप : पुरुषतर्फ गण्डकी र महिलातर्फ पुलिस क्लब विजयी
Next articleआज माघ २९ गते बिहीबार, कस्तो छ तपाईंको राशिफल ?